(Qaran Way Dhaqaaday EE Dhankaaga Ka Raac)
Dubbe:KKKK. Waar heedhee, wallaahi waydinkan dhaqaaqay ee maryaha dhigtay.
Doolaal:Allaylehe ninkaagaa isla qoslaya ayaa dhaqaaqay. Maxaad ku qoslaysaa bal?
Dubbe:Waxa la yidhi.”belaayada aan kaa qoslini belaayaba ma aha.” Waxaan ku qoslayaa waxaan xusuustay nin dhallinyaro ah oo xanauusnayaa, Ilaahay caafimaad ha siiyo isaga iyo kuwa kale ee bukaba eh, oo xaafadda Gacan Libaax , Hargeysa ku nool, oo mar Alla markuu riyaha arko laaya ama ul ha ku dhufto ama hadduu gaadhi waayo dhagax ha ka daba tuuro eh.
Doolaal:Oo muxuu u sheeganayaa?
Dubbe:Wuxuu yidhaahdaa “indhaha gaalada ayay leeyihii.”
Doolaal:Maxaad uga jeeddaa iminka?
Dubbe:Waxaan uga jeedaa. Mar Allah markaa qof Qaran ah aragtaan ayaa ku boodaysaan oo odhanaysaan “indhihii Kulmiye ayay leeyihiin.” Waar marada qabsada oo dadkan aydin sharci darrada ku xidhaysaan joojiya.
Doolaal:Waar anagu cidna sharci darro kuma xidhno ciddii sharciga jebisana gudaha ayaanu dhigaynaa. Ninna laga baqi maayo. Kulmiyaha aad sheegayso ayaanu xidhaynaa. Maxaynaan warba iska hayn?
Dubbe:Waar ninyow malaa waa runtaaye waa waxaanu beryahan dambe la yar baqaynay. Waar inaadeero miyaad na bajinaysaan mise waa runtiin oo waaba na xidhaysaan?Reer magaalka waan ku xidhi lama yidhaaye. Wallaahi “awrkii wacays cunay” wax waliba waa ka suuro galaan. Raggiina Ina Xaashi iyo Ina Gabboose iyo Ina Caydiid xidhay ee aan buus la odhan. Wallee way idiin ahaatay. “Alla uma naxariistaanka angaabay nagu dari.” Buu yidhi Dhallin Ileeye markuu is yidhi walaalkii u soo hiili ee isagii la sigay. Malaa waxaaba la arki anagoo bustayaal iyo barkimooyin iyo kaloodhado cunta ah sii sidna oo idin leh waraaq noo gooya aanu Axmed siilaanyo iyo C/raxman Aw Cali iyo Muse Biixi, iyo Maxamed Kaahin iyo Ibrahim Dhega weyne, iyo Xasan Guure aan u geyne oo idin beryayna oo jeelka hor taagan oo siigadu indhaha kolba naga gelayso. Oo aydin idinla na leedihiin. “ordoo Ina Xaaji Daahir ama Cawil ama Ina Saleebaan weyne ama Ina Bulaale ama duamarka qaar aan la magacaabi karayn hadan xukunka haya waraaq baryo ah u qorta oo dabadeed u geeya Suldaan Janan Cabdi Guray ama Kornayl Cawaale.
Doolaal:Waar baddaa ka bax oo ninkii sharciga jebiya waa la xidhiyaa.
Dubbe:Waaan anigu kuu sheegayaa Qaran way hir gashay u taag heli maysaan ee haysku keen dilina. Saw maad arag nin intay qaar meel u kexeeyaan uun caano ku soo qubaan oo dabadeed suldaan noqda. Weligaaba diid. Adigoo suldaan leh ayuumbaad is arki marka dambe.
Doolaal:Weligoodna hir geli maayaan. Intaanu joogno hadday hir galaan kaa kaadi igaga xiiir.
Dubbe:Maxaan kaaga xiiraa marka horaad nijaas la gashaye. Waar waxaa iska daayoo bal warkii kulankii Ina Xaabsade iyo Ina Rayaale noo dhiib.
Doolaal:Oo kaa ma war baa ku laaban? sawta wargeysyada iyo idaacadahaba laga sheegay. Waar idinku casuumaddii aydin u fidiseen ka warran?
Dubbe:Waar warkii Daraawiishta ayuu kaasi ahaaye kii Khusuusida noo dhiib. Anagu casuumaddaanu u samaynay waynu gaadhiye. Mar kalaan kaaga warramiye.
Doolaal:Waar warku waa isku mide iska qayil.
Dubbe:Waar hadda qudhaydu ma madhni oo waxbaan hayaa ee wax maysu sheegnaa mise waa maya?
Doolaal:Oo haddaad wax hayso maxaad iga weydiinaysaa?
Dubbe:Sawdiga yaqaan dadkeena caadadiisa. Iyagoo warkii haya ayay warkii laftiisa ku weydiinayaa. Tusaale ahaan waxay ku odhanayaan meselan:
“Waar bal warran?”
“waa nabad ee bal warran”
“oo Xaaji Axmed ma yimi shalay tolow?”
“Wallaahi war uma hayo”
“Waar yimiye ma Daallo ayuu la socday tolow mise tii Xabashida?”
“Dee mooji. Adigaaba sheegay e....”
“Waar Daallo ayuu la socday. Tolow nimankii lacagtii ma ka soo helay?”
“Waar anigu dee uma war hayo lacagtan iyo ninkan aad sheegayso midna.”
“Waar ka soo helye. Tolow maw soo dhameeyeen mise badh bay kala hadheen?”
“Waar yaa Ilaahay yaqaan? Dee hadddaba waa ku sidee adeer?”
“Waxaan badnayn bay kala hadheen baa la yidhiye. Nimanku waa tuug weeyaan. Rag badan baa waa ku sameeyeene... tolow ma gurigii buu jogaa iminka mise suuqa ayuu usoo dhaadhacay? Miyaad meelahan ku aragtay?”
“Ahaaaaa. Bal bixisadan eega. Dee mooje baan ku idhi.”
“Mar dhoweyd baan gurigiisii ka soo eegay oo ma joogin. “suuqa ayuu qabtay.” Bay tidhi gabadhiisii.”
“Dee orodoo haddaba raadso oo i nabad geli aniga.”
“Haaa. Xaraf buu ka qoraacdaa subax subaxe baal aan ka soo eego. Oo ma ku gaadhayaa baad u malaynaysaa?
Doolaal:Iminka ma waxbaan hayaa baad leedahay?
Dubbe:Horta “meeshaa ma joogine waxa igu maqaaloobay.” Ayuu yidhi ninkii yiray e. ninbaa iiga warramay kulankii gaarga ahaa ee labada oday. Adigu haddii laga tegi waayo ninkana waxoogaa inuu allifo waan ku aqaanay yeelkadeedee run bay u ekeyd illayn anigaa rabay e.
Doolaal:Muxuu yidhi dee haddaanad iska deynayn hore uun u sheeg?
Dubbe:Waar bahalku samir daranaa dee. Waar wuxuu yidhi sidan bay u dhacday sheekadu:
Rayaal: Waar Axmed bal warran? Shalay markaad timidayba ha la ii keenu baan idhi bay ahayd.
Xaabsade: Madaxweyne waa la roon yahay. Wax dhibaato ahi ma jirto. Haa yarkii Ina Sulub ayaa ii keenay farrinta oo yidhi odaygii baa ku raba. Wallaahi ninkaa yari waa fariid. Illaa Tuka Raq buu aaday. Mindhaa dagaaladii hore ayuusan ku jirin oo kan yaan xuduudda lagaaga horrayn buu is yiri.
Rayaale: Dee inagu aad isuma naqaan oo berigii aad halklan joogtayna siyaasadda kumaan jirin bay ahayd.
Xaabsade: Waxba ma leh. Raggu maruun is bartaa. Iminkaba si xun iskuma baran aynu. Raggu mar hadduu halgan wada galo oo isku hadaf noqdo barasho ka fiican ma jirto ay.
Rayaale: Laakiin aan iska kaftannee. Berigii aad Laascaanood nagu soo weerartay maxaad sidaa noogu gashay?
Xaabse: Kee? Oo raggu mar hadduu is galo sow ma kala gallad la’a. waar . miyuu is yeelyeelayaa? Maxaadse idinku la yaacdeen aydin waxa magaalada idiinku yimiba afar gaari ma dhamayne? Wallaahi faraskayagii Ina Dabayl Qabad mooyaane inaanan wa kale idinku mesaalin. Belo ku degtay. Waxaan iri waar nimanka reer galbeed saw inaku jabaan. Waar nimanku dheereeyeen.
Rayaale: Anigu runtii aan joogno baaban idhi bay ahayd ee raggii kale ayaa yidhi inaga saara. Laaakiin sawkii Daaniye yidhi ciidan badan bay ahaayeen.
Xaabsade:Daaniye waa kee? Waar ba’a heedhe me kii Jamac Siyadku dhalay ee anu abtiga u ahayn baa? Oo ma kula socday usna? Oo kaasi waa iska belo sidiisa ahe. Ma usagaa yiri ciidan badan bay ahaayeen. Kufurtu billaahi inaanu afar gaari mid u dheerayn.
Rayaale: Anigu waan garanay. Waan gartay markiiba.
Xaabsade: Waar heedhe Madaxweyne. Oo adigu wax walba ma garnay? Taan soo qaadaba waan garanay baa dleedahay. Mise waati la yiri qolada galbeedku waa faalisaaye tusbaxan aad gacanta ku hayso ayaad rogtay?
Rayaale: Anagu faalka waanu naqaanaa laakiin kuma camal falno eh. Maxaad noo tidhi ma farasbaa nimanku haddaanu angu dadkii badbaadinay oo dagaalkii idinkala baxnay? Dadku se inuu dadkayagii ahaa sow ma ogid?
Xaabsade: kkkkkkk. Wallaahi meel baad horta igaga soo baxday. Laakiin aan mid kuu sheego. Anigu idinma oran raaggu waa fardo. Dadkii baa idin sheegay. Aniga mid aanu ilma adeer ahayn oo dhinacna aan abti uga ahaa oo gabadh aanu aad isugu dhawnahay dhashay, hadeer iskaba dhimayba oo dagaaladii baa lagu dilaye, ayaa ii sheegay oo yidhi “shaaggii gaadhigii Ina Rayaale maray go’gii dambe ayaanu geela ka waraabinay” weliba hal geelayga ka mid ahayd oo Derbi la yiraahdaa waaba ku jabi gaadhay iyadu. Siduu ii sheegay. Waar ma hashaa sidaan uga nahay baadan ogayn.
Rayaale: Waar heedhee nimankiina reer bari. Oo hashiina waad ka naxday ninkii dhammaa ee aad marna ilmaadeerka ahaydeen marna aad abti u ahaydna kamaad nixine waa sidee. Alla ha u naxariistana maad odhane.
Xaabse: Oo “nin dhintay kabahiisaa dhaama.” Ma aad maqal miyaa? Waar ninkaasi dhimaye. Haddeer teena inoo wadoo nimankii Waa inaku soo maqan yihiin........
Waa inoo todobaadka dambe, haddii Eebbe idmo.
Posted by Daljir at 7:24 AM